Ny tombony azo avy amin'ny microalgae amin'ny maha biofuel | Fanavaozana maintso
Nandritra ny taona vitsivitsy dia natao ny fikarohana sy ny fanandramana microalgae hampiasa azy ireo hanamboarana biofuels satria manana tombony maro noho ny akora hafa izy ireo. Ny microalgae dia ampiasaina amin'ny fampiasana fanafody, sakafo sns.
Ireo microalgae ireo dia zavamiaina bitika photoautotrophic unicellular, miaraka amin'ny fahaizana mahazo angovo avy amin'ny taratra maivana ary mampifangaro ny biomolecules-n'izy ireo amin'ny ankapobeny. karbonika (CO2) sy ny rano.
Ny sasany amin'ireo manamarika indrindra dia:
Ny microalgae dia be dia be eto ambonin'ny planeta, tsy amin'ny habeny ihany fa amin'ny karazany isan-karazany. Karazana ahidrano 30.000 no fantatra fa 50 fotsiny no nianatra tamin'ny antsipiriany ary 10% ihany no ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra sasany. Ka misy vintana tsara ahazoana vokatra tsara amin'ireo mbola tsy mianatra.
Izy ireo dia manana ny fahafaha-miasa ampiasaina amin'ny fanaovana vokatra isan-karazany toy ny bioethanol ny gliosidratanao, biodiesel ny lipida na ny menaka, biogaz ary mieritreritra ny omby amin'ny proteinina aho.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny microalgae dia ny ahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny sira, rano madio ary na dia mijanona aza, noho izany dia manana adaptation tena tsara izy ireo. Ary tsy mamela tany azo ampiasaina hamboly azy ireo.
Ny famokarana ireo microalgae ireo dia mamela ihany koa mifoka CO2 ny rivotra iainana.
Microalgae dia akora misy akony lehibe hery anaty fa ny ankamaroan'izy ireo dia mbola eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fanandramana.
Saingy antenaina fa amin'ny fotoana fohy dia hivoatra ireo vokatra vaovao mifototra amin'ireo izay mahasoa ara-toekarena sy maharitra ara-tontolo iainana.
Ny microalgae dia mety ho ampahany amin'ny vahaolana amin'ny olana amin'ny fiarahamonina maoderina an'ny lasantsy fosily sy ny loto aterak'izy ireo. Satria ekolojika tanteraka izy ireo, saingy tsy maintsy azonao tsara izy ireo mba hahafahany mampiasa sy mitrandraka azy ireo ara-barotra.
SOURCE: Ny ekonomista. izany dia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biodiesel » Ny tombony azo avy amin'ny microalgae amin'ny maha biofuel azy
Ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny vokany eo amin'ny fiaraha-monina